लगानीकर्ताको सम्पत्तिसहित कारोबार रकम घट्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी लगानीकर्ताको सम्पत्तिसहित कारोबार रकम घट्यो
लगानी 27 views
लगानीकर्ताको सम्पत्तिसहित कारोबार रकम घट्यो
मङ्गलवार नेप्से परिसूचक १ दशलमव ३६ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । यस दिन घट्ने र बढ्ने क्रम भइरहँदा अन्त्यमा बजार घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको आधा घण्टामा १ हजार २ सय ६७ विन्दुमा पुगेको बजार १ घण्टा १५ मिनेटमा १ हजार ९१ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुपछि बजार ओरालो लागेर अन्त्यमा १७ दशमलव ५५ अङ्क घटेर १ हजार २ सय ७० दशलमव २३ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम ६३ दशमलव २४ प्रतिशत घटेको छ ।
विगतमा बजार घटेको बेला शेयर किनेका लगानीकर्ताहरूले बजार बढेर १ हजार ३ सय १७ मा पुग्दा विक्री गर्न थालेपछि बजार घट्न पुगेको एक लगानीकर्ताले बताए । पूँजीबजारमा शेयर कारोबारलाई मात्र पेशा बनाएर बसेका धेरै विद्यार्थी गृहिणीहरू छन् । यिनीहरूले थोरै फाइदा आयो कि बेचिहाल्ने प्रचलन भएकाले बजारमा उतारचढाव आएको देखिन्छ ।
यस दिन कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घटेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र बीमा समूहको २ दशमलव ६३ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीको ५ हजार ४ सय ४१ पटकको व्यापारमा ९ लाख ८३ हजार १ सय ५९ कित्ता शेयरको रू. ३४ करोड ९० लाखबराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
सर्वाधिक शेयर कारोबार हुनेमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ४ सय ६१ मा रू. १ करोड ३७ लाखबराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ८ प्रतिशत बढेको छ भने हाम्रो विकास बैङ्कको शेयरमूल्य ७ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार भएका १ सय ६० कम्पनीमा ३० कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय २४ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
कुल बजार पूँजीकरण १ दशमलव ३६ प्रतिशत घटेर रू. १४ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ३२ प्रतिशत घटेर २ सय ७१ दशमलव २२ अङ्क पुगेको छ । त्यसैगरी, यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अथवा ५० दशमलव ५१ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार बियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १३:२२